Phyo Wai Min | Yangon School of Political Science
Author: Phyo Wai Min
Home \_ Author Phyo Wai Min
Announcement for Street Law Class
By Phyo Wai Min | Announcement
ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီဝင် ရွေးကောက်ပွဲဝင်မည့်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ ပြည်သူသို့မိတ်ဆက်ဆွေးနွေးခြင်းအခမ်းအနား ဒုတိယနေ့
ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီဝင် ရွေးကောက်ပွဲဝင်မည့်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ ပြည်သူသို့မိတ်ဆက်ဆွေးနွေးခြင်းအခမ်းအနားကို ဒုတိယနေ့အဖြစ် (၂၄-၃-၂၀၁၉)တွင် ရန်ကုန်မြို့၊ကျောက်တံတားမြို့နယ်၊မဟာဗန္ဓုလပန်းခြံ၌ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အခမ်းအနားတွင် အခမ်းအနားမှူးအဖြစ် ရန်ကုန်နိုင်ငံရေးသိပ္ပံကျောင်းမှ volunteer မဇာဇာအောင်က ဆောင်ရွက်၍၊ ရန်ကုန်နိုင်ငံရေးသိပ္ပံကျောင်းဥက္ကဋ္ဌ ဦးမြတ်သူက အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ဤမိတ်ဆက်ဆွေးနွေးပွဲ၌ Moderator အဖြစ် ဦးအောင်ကျော်ဖြိုး(Director of MID)က ဆောင်ရွက်၍ မဲဆန္ဒနယ်(၃)မှဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ကြမည့် ဦးခင်လှိုင်၊ ဦးလပ်သင်းနှင့် ဦးအောင်ခန့်တို့သည် မိမိတို့အတွေးအမြင်များကို ပြည်သူသို့တင်ပြဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ အခမ်းအနား(၂)ရက်တာကျင်းပရာတွင် ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုကိုThe Asia Foundation ကကူညီပံ့ပိုးပေးခဲ့ပါသည်။ ဤမိတ်ဆက်ဆွေးနွေးပွဲဖြစ်မြောက်ရန် ကူညီပေးခဲ့ကြသော ပန်းရဲ့လမ်းတေးဂီတအဖွဲ့၊ volunteer များ၊ ကြွရောက်လာကြသော ပရိတ်သတ်အပေါင်းတို့ကိုလည်း ရန်ကုန်နိုင်ငံရေးသိပ္ပံကျောင်းနှင့် New Myanmar Foundationတို့က ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါကြောင်း။ပိုက်ဆံအကုန်ခံပြီး Facebookတွင်ကြော်ငြာပေးသည့်အပြင် ပွဲသို့လူကိုယ်တိုင်လာရောက်၍ အကူအညီပေးချင်ကြောင်းပြောကြားပေးပါသော မင်းသမီးသန္တာလှိုင်ကိုလည်းကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါသည်။
By Phyo Wai Min | Announcement . Event News
ရန်ကုန်မြို့တော် စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီဝင် ရွေးကောက်ပွဲဝင်ရောက်မည့်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ၏ အတွေးအမြင်များအား ပြည်သူသို့ မိတ်ဆက်ခြင်း အခမ်းအနား
ရန်ကုန်မြို့တော် စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီဝင် ရွေးကောက်ပွဲဝင်ရောက်မည့်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ၏ အတွေးအမြင်များအား ပြည်သူသို့ မိတ်ဆက်ခြင်း အခမ်းအနားကို (၂၃-၃-၂၀၁၉) တွင် ရန်ကုန်မြို့၊ကျောက်တံတားမြို့နယ် မဟာဗန္ဓုလပန်းခြံ၌ ရန်ကုန်နိုင်ငံရေးသိပ္ပံကျောင်းနှင့် New Myanmar Foundation တို့ပူးပေါင်း၍ စီစဉ်ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ အခမ်းအနားတွင် ရန်ကုန်နိုင်ငံရေးသိပ္ပံကျောင်း ဥက္ကဋ္ဌ ဦးမြတ်သူက အဖွင့်အမှာစကားနှင့် ပြုလုပ်ရခြင်းရည်ရွယ်ချက်များကို ရှင်းလင်းပြောကြားပါသည်။ ဤမိတ်ဆက်ဆွေးနွေးပွဲတွင် ဆလိုင်းအိုက်ဇက်ခင်က (Moderator)အဖြစ်ဆောင်ရွက်၍ ဦးဝင်းချို(မဲဆန္ဒနယ်-၃)၊ ဦးမြင့်ကြည်(မဲဆန္ဒနယ်-၃)၊ ဦးမျိုးမြင့်(မဲဆန္ဒနယ်-၄)နှင့် ဦးလှမျိုးမြင့်(မဲဆန္ဒနယ်-၄) တို့သည် ပါဝင်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ ဤပွဲဖြစ်မြောက်ရန် ငွေကြေးအရပံ့ပိုးပေးသော The Asia Foundationကို အထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်းနှင့် ပန်းရဲ့လမ်းတေးဂီတအဖွဲ့၊volunteersများ၊တက်ရောက်အားပေးခဲ့သော ပရိတ်သတ်အပေါင်းတို့ကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်း။
IPS(Intensive Course) Completion Ceremony
On 16th March 2019, the intensive course of the Introduction to Political Science, from 11th to 16th of March 2019, successfully concluded. Our heartfelt thanks go to U Aung Kyaw Phyo, U Myat Thu, U Myat Ko Ko, and U Pyae Sone Aung who helped with teaching in the Course.
By Phyo Wai Min | Announcement . Short Course training